မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသော ကုလဆုံးဖြတ်ချက်အချို့ကို သဘောမတူဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်? - Yangon Media Group
”ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ မွတ် စလင်တွေနဲ့ ရခိုင်တွေအပြင် အခြားတိုင်းရင်းသားအားလုံးအတွက် ငြိမ်း ချမ်းရေး၊ သာယာဝပြောရေး၊ လူ့အ ခွင့်အရေးရရှိတာကို မြင်လိုကြတဲ့လူ တိုင်းအနေနဲ့ သူတို့တွေကြားစိတ် ဝမ်းကွဲအောင်လုပ်မယ့်အစား အတူ တကွ လက်တွဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သင့်ပါတယ်”ဟု အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းမှ အာရုံစိုက်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းရှိ လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု စသော စွပ်စွဲချက်များနှင့်ပတ်သက် ၍ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံ တကာသတင်းထောက်များက ဝိုင်းဝန်းမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ လူ့အခွင့်အ ရေးချိုးဖောက်မှု စွပ်စွဲချက်များကို မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ သံတမန်နှစ်ဦးပါဝင်သည့် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီး ဆောင်ရွက်နေ ကြောင်း အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က သတင်းထောက်များအား တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်းင်း ချက်နိုင်ငံကို လာရသည့်အကြောင်း ရင်းတစ်ခုမှာ မြန်မာသံရုံးပြန်ပြီးဖွင့် ရန်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ၁၉၈ဝခုနှစ်များဝန်းကျင်ခန့် က မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ချက်နိုင်ငံနှင့် သံတမန်ရေးဖြတ်တောက်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာသံရုံးပြန်ဖွင့်နိုင် ခြင်းက နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတိုး တက်မြင့်မားကောင်းမွန်လာသည့် လက္ခဏာဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေဖြင့် ၂၆နှစ်ကျော်ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံသံရုံးကို ပရာ့ခ်မြို့မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ် ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းကို အသိအမှတ် ပြုတန်ဖိုးထားကြောင်း၊ ကဏ္ဍပေါင်း စုံတွင် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်လာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် Andrej Babis က ပြော ကြားခဲ့သည်ဟု ချက်အစိုးရ၏တရား ဝင်ဝက်ဆိုဘ်ကဖော်ပြထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ချက်သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Andrej Babis နှင့် ဇွန် ၃ ရက်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ချက်သမ္မတနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်က ချက်သမ္မတနိုင်ငံထူထောင်ပြီး နောက်နှစ်နိုင်ငံအကြားဝန်ကြီးချုပ်အဆင့် ပထမဆုံးအကြိမ် တရားဝင်အလည်အပတ် ခရီးစဉ်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အ နေဖြင့် Velvet တော်လှန်ရေးနှစ်သုံး ဆယ်ပြည့်ကာလတွင် ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသည် ကာလရှည်ကြာတံခါးပိတ်ထားသော နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အ နေဖြင့် ဒီမိုကရက်တစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရေးဖော်ဆောင်ရန် အပတ်တကုတ် အားထုတ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကာ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် တံခါးပွင့်လာ ပြီဖြစ်ပါကြောင်း ချက်ဝန်ကြီးချုပ် က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ချက်အစိုးရ က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
”မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လာမည့်နှစ်များအတောအတွင်း စီးပွား ရေးကဏ္ဍမှာ သိသိသာသာခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ဆောင်ရွက်ရန် စီစဉ်လျက် ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စီးပွား ရေးကဏ္ဍမှာ အလားအလာကောင်း တွေမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုဟာ သမိုင်းကြောင်းရှည်ရှည်လျား လျားရှိခဲ့ပါတယ်။ ချက်ကိုစလိုဗက် ကုမ္ပဏီတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၁၉၇ဝ နဲ့ ၁၉၈ဝဆယ်စုနှစ်တွေထဲမှာ ဘီယာ စက်ရုံ၊ သကြားစက်ရုံအပါအဝင် စက်ရုံအများအပြားကို တည်ဆောက် ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ ကျွန် တော်တို့နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီတွေကို စီးပွားရေးလာလုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းသလို ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာပို၍ ပို၍ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာလိမ့်မယ်လို့ ကျွန် တော်ယုံကြည်ပါတယ်”ဟု ဝန်ကြီး ချုပ် Andrej Babis က ပြောသည်။
ချက်သမ္မတနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံကို ပံ့ပိုးပေးနေသည့် လူသားချင်း စာနာသောအထောက်အပံ့နှင့် ဖွံ့ဖြိုး ရေးအထောက်အပံ့များသည် လတ် တလော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းဖြစ် ကြောင်း၊ အဆိုပါအထောက်အပံ့များ ကို ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် သဘာဝဘေးမှ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကဏ္ဍများတွင် အဓိကဖော်ဆောင် လျက်ရှိကြောင်း ချက်အစိုးရ၏ထုတ် ပြန်ချက်အရသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပံ့ပိုးသည့် အ ထောက်အပံ့ပမာဏသည် ချက်နိုင်ငံ ခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြည်ပတိုင်း ပြည်များသို့ ပေးအပ်နေသည့် အ ထောက်အပံ့စုစုပေါင်း၏ ၁ဝရာခိုင် နှုန်းနီးပါးရှိကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုကိုပိုမိုချဲ့ထွင်ရန်လည်း ဝန်ကြီး ချုပ်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်တို့က သဘောတူခဲ့ကြကြောင်း ယင်းထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြသည်။
”လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်တာ ကာလမှာ ချက်သမ္မတနိုင်ငံအနေနဲ့ မြန်မာကျောင်းသားတွေကို အစိုးရ ချင်းပညာသင်ဆုတွေ အထောက် အပံ့ပြုခဲ့တာဟာ အကျိုးပြုခဲ့တဲ့အ ပြင် တက္ကသိုလ်တွေ သုတေသီတွေ အကြားမှာလည်း ပူးတွဲစီမံချက်တွေ ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင် ဟာ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ရဲ့အမြင်နဲ့ ထပ်တူကျပါတယ်”ဟု ချက်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောခဲ့သည်။
VOA,NTVOA,NTGovernment of the Czech Republice
ဘုတလင်မြို့နယ် မောင်းထောင်ကျေးရွာ၌ ကြွက်များ အစုအပြုံလိုက်သေဆုံးနေ၍ ကျန်းမာရေးဌာနမှ စောင?
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ် သီရိဟေမာ အရှေ့ရပ်ကွက်တွင် ဝိုင်ယာရှော့ခ်ဖြစ်ရာမှ သင်္ကန်းတိုက်တစ်ခု မ?
“ကျွန်တော်တို့ ရွာသားတွေ ရိုက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကို ကြည့်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ရုံထဲက ပြန?
ဖိနပ်များ ခင်းကျင်း၍ ပါလက်စတိုင်းတို့၏ အတိဒုက္ခကို မီးမောင်းထိုးပြ